Fitsidihana apostolika: maniry fitoniana ny mpino silamo nihaona tamin’ny Papa | NewsMada
Fitsidihana apostolika: maniry fitoniana ny mpino silamo nihaona tamin’ny Papa
Tohin’ny fihaonana teo amin’ny finoana roa tonta teo aloha natao tany ivelany ny teny Mahazana. Nifandray tanana sy nifampiresaka tamin’ny Papa Fransoa ihany koa ny lehibem-pivavahana avy amin’ny finoana silamo, ny alahady tolakandro teo.
“Midika ho fandriampahalemana ny fihaonana ary miandrandra izany izahay. Afaka miray hina ary miandrandra fihavanana sy firaisankina ho fanatsarana ny fiarahamonina eo amin’ny kristianina sy ny avy amin’ny silamo”, hoy ireto mpitari-pivavahana avy amin’ny finoana silamo ireto. Efa nisy rahateo ny fihaonana teo amin’ny mpitarika ny mpino silamo, tamin’ny alalan’ny Imam Al Azhar sy i Ahmad Al-Tayeb, ny 23 mey 2016. Anjaran’ny teto Madagsikara indray izany tamin’izao dian’ny Papa Fransoa teto amintsika izao.
Nanafatrafatra ireo eveka ny Papa Fransoa
Ankoatra izany, nanafatrafatra ny eo anivon’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem) koa ny Ray Masina, ny asabotsy hariva teo teny Andohalo. Notsiahiviny fa tokony hisy fifanatonana eo amin’ny finoana sy ny mahantra. “Aza hadinoina izy ireny. Manana adidy sy fifandraisana amin’ireny ianareo. Anisan’izany ny ankizy sy ireo marefo ary ireo fadiranovana na koa iharan’ny tsindrihazolena” , hoy izy.
Ny filoha teo aloha, Ravalomanana
Etsy an-daniny, anisan’ny nandray tanana sy nitafa fohy tamin’ny Papa Fransoa koa ny filoha teo aloha, Ravalomanana mivady. Notsiahivin’ny vadin’ny ben’ny Tanàna tamin’izany ny taratasy nalefany tany Vatikana manoloana ny fiainam-pirenena. “Voarainy izany ary fantany fa mafana fo sy tia fihavanana isika… Mahafantatra tsara koa ny Papa Fransoa fa ilaina ny fifampiresahana sy fifanatonana satria tena sahirana ny Malagasy… Enga anie mba hitondra soa eto amin’ny firenena ny fihavanana notoriany”, hoy ny filoha teo aloha, Ravalomanana.